Topnews:-Loolanka Xawaaladaha Somalida - shanta ugu cad cad sanadkaan.
29 March 2013 Waagacusub.com-Kaah Express ayaa sanadka cusub hogaanka u qabatay Xawaaladaha Somalida kadib markii uu maamulkeeda uu la wareegay Hassan Abdi Cawad oo ah Xeeldheere ku taqasusay nidaamka Xawaalada ahna Maamulahii hore ee Shirkadda Dahabshiil.Halka dhinaca kalena ay kaalinta 2-aad ku loolamayaan Amoud Express,Hodan Global,Juba Express iyo Iftin Express. Hassan Abdi Cawad oo lagu xasuusto Maskaxdii uu geliyay dhismaha laamaha Dahabshiil wuxuu socdaal shaqo ku jooga qaarada Yurub isagoo booqday Xarumaha Kaah Express ee Ingiriiska,Holland,Sweden ,Jarmalka iyo Norway.
Maamulaha Cusub ee KAAH EXPRESS intii uu Yurub imaan ka hor,wuxuu heshiis uu ku metelayay Shirkadiisa la saxiixday Shirkadda weyn ee SILATECH taas oo la shaqeeysa Bangiyadda dalalka soo koraya .
SILATECH waxaa la rumeeysan yahay inay leeyihiin qoyska Boqortooyadda dalka QATAR.
Aragti laga aruuriyay Qurba joogta Somalida iyo bulshada ku nool gayiga afka Somaliga looga hadlo ayaa Kaah Express,Hodan Global,Amoud Express,Juba Express iyo Iftin Express ku tilmaamay Xawaalado ku loolamaya ganacsi madaxbanaan.
Dadka qaarkii waxay leeyihiin Xawaaladaha Juba Express iyo Amoud Express oo dhawaan la furay lama dhayalsan karo maxaa yeelay waxay suuqa la soo galeen dardar xawaare sare taas oo durba macaamiil badan ku kasbadeen.
Boqolaal qof oo Amoud Express ku darsatay Saami ayaa Waagacusub u sheegay inay Faa-iido xoogan ka heleen saamigooda.halka sidoo kalena Amoud noqotay Xawaalada kaliya ee qiimo jaban lacagaha ku xawisha,tusaale Boqolkii Dollar waxay ku xawilaan laba Dollar halka Xawaaladaha kale shan dollar ku xawilaan.
Sababaha Amoud Express ku heshay Macaamiil fara badan waxay tahay iyadoo khidmad la''aan ku direeyso lacagaha tabarucaada ,sida kaalmooyinka Masaajidyada ,Isbitaalada,Isguulada,Ceelasha iyo dadka abaaraha.
Maamulaha Amoud Express Abdirizak Mowliid wuxuu yiri "Amoud Express waa Xawaalad bulshada afka Somaliga ku hadasha wada leeyihiin una furan inay saami ku yeeshaan ama Macaamiil la noqdaan"
Hadalka Abdirizak Mowliid ayaa ku beegan xilli Amoud Express isku balaarisay Koofurta Somalia.